Leverage, be dia sisiny - Best Forex EA ny | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolLeverage, be dia sisiny
Inona no Leverage?
Leverage maneho ny sisiny varotra tahan'ny, ary amin'ny forex izany dia afaka ny ho avo dia avo, indraindray toy 400: 1, izay midika fa ny sisiny fotsiny petra-bola ny $ 1000 afaka mifehy ny toerana haben'ny $ 400,000.
Raha Nomena 100: 1 leverage brokerage kaonty, ary nisy Mini kaonty amin'ny $ 1000 (1000 vondrona), afaka miditra $ 100 (100 vondrona) izany tantara ho eo an-tsena amin'ny sisiny sy ny varotra ny $ 10,000 (10,000) tarika toerana. Fa na $ 1 nataony tao an-tsena eo amin'ny sisiny iray hafa ny broker manampy $ 99 mba hanaovana azy $ 100. Midika izany dia afaka varotra Mini maro vidiny $ 10,000 mampiasa ny famatsiam-bola ihany ny kaonty $ 100 na mihoatra.
Leverage 1: 100 mamela ny mpanjifa mba hametraka ny 1 anjara ho an'ny tsirairay 100 amin'ny varotra; amin'ny ohatra etsy ambony, mpanjifa anjara $ 100 sy ny sisa ($ 9,900) dia avy amin'ny broker.
Fanamarihana: Broker leverage Tsy miova hasarobidin'ny filokana!
Leverage dia tsy misy fiantraikany ny hasarobidin'ny ny filokana; ny Mini filokana dia 10,000 vondrona sy fitsipika be dia be no 100,000 vondrona, na inona na inona ny leverage. Kosa, leverage manana fiantraikany eo amin'ny isan'ny antsapaka dia afaka manana tany an-tsena, mifototra amin'ny ny renivohitra ao amin'ny tantara.
Mifanohitra ny tahiry tsena izay mitaky ny fametrahana feno ny vola varotra, ny Forex Ny tsena dia mitaky marika marindrano. Ny ambiny amin'ny vola dia omen'ny mpividy anao (ianao hindraminao avy amin'ny mpampanao azy). Ny tahiry dia afaka mamela anao hindramina amin'ny mpividy anao amin'ny margin, saingy raha ny 2 ihany: 1 hampiasa, ary ny hoavinao dia afaka manome bebe kokoa (up to 30: 1), saingy amin'ny ambaran'ny fifanarahana mifamatotra izay mampihena ny fahaiza-flexibility.
Forex, mifanohitra, mamela ny fahafahana hampiasa bebe kokoa leverage (hatramin'ny 400: 1) miaraka amin'ny fanampiny tombony amin'ny fampiasana miovaova be habe. Varotra rehetra dia afaka atao amin'ny alalan'ny fitsipika, Mini, madinika na indraindray toy ny ambany toy ny Nano na ariary haben'ny. Tsirairay filokana haben'ny tantara ho ohatry ny vondrona hafa ny ny tena ratsy sandam, izay kosa manolotra pip hafa sarobidy. Ity ambany ity ny tabilao tsotra mba hanehoana ny fahasamihafana eo amin'ny filokana habe, refesina amin'ny venty, boky ho an'ny lehibe tsiroaroa izay ny base vola dia USD (Eks. EURUSD na GBPUSD).
1 Standard Lot 100,000 vondrona 1.0 1 pip = $ 10
1 Mini Lot 10,000 vondrona 0.1 1 pip = $ 1
1 Micro Lot 1,000 vondrona 0.01 1 pip = $ 0.10
1 Nano Lot 100 vondrona 0.001 1 pip = $ 0.01
Fa kajy mazava kokoa ny pip sarobidy, izay afaka miovaova rehefa tsy base USD, dia afaka mampiasa ny aterineto pip fanaovana kajy.
Ankehitriny, inona no mahazo mahaliana ny mifandraika io maro be ny filokana habe amin'ny maro be ny leverage.
Ny latabatra eto ambany mampiseho ny karazana leverage, isan-jato amin'ny sisiny ilaina mba hanokatra ny loka anankiray, ary ny vokatry ny dolara vola takiana mba hanokatra ny loka anankiray (Standard, Mini, madinika sy Nano):
Leverage / sisiny Fepetra Loha Hevitra ho an'ny Various Lota Sizes
% Ny sisiny ilaina
hanokatra 1 be
Takiana 1 fitsipika
be ($ 100,000)
Takiana amin'ny 1 Mini
be ($ 10,000)
Takiana 1 madinika
be ($ 1,000)
$ Vola (sisiny)
Takiana 1 Nano
be ($ 100)
Azonao atao ny mijery avy amin'ny tabilao ambony izany amin'ny 100: 1 leveraged broker ianao ihany no takiana mba hametraka ny $ 10 ho an'ny tsirairay ($ 1000) madinika loka. Midika izany fa raha vao $ 200 ao an-tantara, ianareo dia hanana ny fahafahana varotra hatramin'ny 20 hatramin'ny bitika be dia be toerana, raha maniry izany.
Fa TSY MANDROSO!
Tsy soso-kevitra ianareo varotra na dia 10% ny tahan'ny amin'ny sisiny nomena mpitovo na aggregate toerana be. Smart leverage, araka ny ho hitantsika, dia bebe kokoa amin'ny amin'ny tsipika ny 2: 1 leverage, na 2% ny afaka sisiny.
Ohatra, raha manana kaonty micro ianao amin'ny $ 1000, amin'ny 100: leverage 1, dia tsara kokoa raha toa ka tsy manararaotra 2 micro micro (2: 1 leverage, na 2% maimaimpoana maimaimpoana). Izany dia mamela anao 98% maimaimpoana ("marika tsy nampiasaina na misy") hametrahana ny varotrao. Ny pipy tsirairay dia hanova ny kaontinao amin'ny 20 cents (2 micro micro X 10 cents). Ankoatr'izay, dia mety ho fitsipika tsara ny mitera-doza tsy mihoatra ny 2% amin'ny varotra iray. Ny fametrahana fantsom-panafody 100 fantsom-pifandraisana 2 loton'ny varotra an-tsokosoko 2 dia midika fa hampidi-doza ny 100% (20X20 cents = $ 2, izay 1000% amin'ny $ XNUMX). Io dia mamela anao ho tafavoaka amin'ny fatiantoka marobe, izay toe-javatra mahazatra amin'ny forex.
Ny fananana fahafaham-po dia mety ho namanao na fahavalonao, miankina amin'ny fomba fampiasana izany. Toy ny fitaovam-pivarotana lehibe ny fahazoan-dàlana dia mamela ny mpivarotra manana renivohitra kely kokoa handray anjara amin'ny tsena izay tsy azony varotra raha tsy izany, fa toa ny fitaovana rehetra (eritrereto ny fihenam-bolo), mila mianatra ny mampiasa azy tsara ianao na afaka manapaka anao. midina.
Inona no mety ho ny mety ho doza Ary ny hamaliana ny mifidy ny Broker Fanatitra A ambony Leverage noho ny hafa?
Ny ankamaroan'ny lahatsoratra miady hevitra momba ny fampiasana solosaina sy forex fampitandremana amin'ny orinasam-pivarotana brokerage manolotra tombony ankoatra ny 100: 1. Inona no ao ambadik'ireny fampitandremana ireny? Matetika dia ny fomba fijery tsy dia mazava loatra fa ny mpividy mahazatra dia mpangalatra tsy misy dikany izay mety tsy hahalany ny fahafaha-manao, raha omena ny vintana. Ny fampiasana an'io tranga io dia toy ny tady, ary rehefa omena azy ny mpanjifa dia mihantona eo aminy. Hitany fa ny 400: broker 1 dia hamela azy hanakarena ireo singa 100,000 amin'ny kaonty $ 300 $ XNUMX, ary noho izany dia manararaotra izany fahafahana izany izy, ary mamela ny kaontiny kely ho an'ny fahafatesana haingana.
Ny governemanta amerikana izay mihevi-tena ho tompon'andraikitra (amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny CFTC) koa dia mihevitra fa ny mpanjifa mahazatra dia manjavozavo tsy misy dikany ary noho izany tao amin'ny 2010 dia niaro ny mpizara vola avy amin'ny tenany izy tamin'ny fanerena ny brokerage rehetra amerikana hanaraka ny ambaratonga lehibe indrindra amin'ny 50: 1, fitsipika izay nanan-kery tamin'ny volana 2010. Ho an'ny mpikarakara, ny CFTC Te hampihena ny fampiasa amin'ny 10: 1 haka ny "filokana" amin'ny forex, fa amin'ny farany dia nanapa-kevitra fa ny 50: 1 dia "mahay mandanjalanja" kokoa ary mifanaraka kokoa amin'ny fampiasan'i Japana momba ny forex. Talohan'ny 2010, taloha dia ny brokers amerikana dia afaka manome tombony amin'ny 100: 1 na 200: 1. Tsy izay intsony. Ankehitriny Etazonia mametra ny fihenan'ny 50: 1 ary Japana mametra leverage ho 25: 1, ny ankamaroan'ny firenena hafa manana leverage ambony.
Amin'ny ankapobeny, heveriko fa ny famerana ny safidin'ny mpivarotra amerikana dia asa ratsy ary tsy mifaninana amin'ny tontolo hafa. Betsaka ny mpivarotra amerikana teo aloha no nifarana ny kaontiny any ivelany mba hankafy ny forex nefa tsy misy fetrany. Ny Brits na Aussies na Soisa dia tsy ho maika hitifitra ny tenany eny an-tongotra, rehefa TSY TOKONY hanaraka ny amerikanina izy ireo dia afaka mahazo vola an-tapitrisany maro. Ity fetra amin'ny fanjanahana amerikanina ity dia iray amin'ireo fetra marobe (ohatra, ny fitsipika tsy mitoka-monina), izay tsy nanao na inona na inona mba hanampiana ireo mpivarotra ary manao zavatra bebe kokoa mba hamerana ny fahaizany mahazo bebe kokoa any Etazonia. eo amin'ny mpanaraka ny governemanta amerikana hihevitra fa 50: 1 leverage dia "tsara" ho an'ny salan'isa forex mpivarotra.
Ny tena marina ny raharaha dia avo leverage brokerage sy ho azy fa tsy mampidi-doza. Satria forex leverage dia tsy manova ny hasarobidin'ny ny filokana, dia manana safidy ny varotra isan-karazany be dia be habe, dia tsy voatery ho kokoa ny mampidi-doza ny hanana bebe kokoa leverage, araka ny mety ho amin'ny hoavy, izay tsy afaka manova ny filokana haben'ny. Higher leverage manome fotsiny ny fahafahana lehibe kokoa varotra maro (na mihoatra antsapaka) miaraka amin'ny tsy renivohitra. Raha nanana afa $ 500, ohatra, dia afaka manokatra ny iray amin'ny tantara bitika 400: 1 leverage, mba afaka mifehy ny mba 20 madinika maro ihany $ 2.5 sisiny ho an'ny tsirairay avy. Na, afaka mifehy 1 bitika be dia be amin'ny fotsiny $ 2.5 sisiny. Amin'ny eo ny kely indrindra sy ambony indrindra sy ny fampiasana ny leverage betsaka sizing dia be isan-karazany ny manovaova.
Manaiky aho fa ny fananana bebe kokoa ny leverage mety hampidi-doza ny dia mety ho tia vola mpivarotra, fa samy tia mpivarotra dia tokony hanana fahafahana hanantona azy sy hanala ny tenany avy any an-tsena. Raha misy tia mpivarotra manana $ 1000 ny 400: 1 bitika kaonty, ary te hampiasa ny ambony indrindra azo atao leverage ny raharaham-barotra, dia afaka manokatra 3 Malagasy maro tao amin'ny kaonty (amin'ny ampiasaina sisiny $ 750), ary Gamble ny fomba haingana fahafatesana. Kely 30 pip hetsika manohitra ny toerana dia nampisy fiantraikany $ 900 (10 X $ 10 isan-pip X 3 maro), ary amin'izany izy fa avy hatrany handray ny sisiny antso izay hivarotra ny 3 Malagasy maro, satria izy intsony efa ny ilaina sisiny mifehy azy ireo.
Noho izany, dia mendrika naka fanamarihana ny fampitandremana miverimberina matetika: HIGH LEVERAGE Mitana Mety hitarika ho fatiantoka koa ny Mitana tombony. Eny, indrindra fa ho an'ny moana, tia mpivarotra izay mampiasa be loatra ny leverage misy ho azy ireo.
Amin'ny raharaham-barotra Trade Latsaky Per Leverage Raha hamandrika ny zo ambony Leverage
Mino aho fa ny malefaka leverage SY malefaka be sizing omena ny Forex dia afaka mamela ny ankamaroan'ny mpivarotra lavitra ara-barotra azo antoka kokoa noho ny kianja na boloky hazo na hoavy. A hoavy mpivarotra dia tsy maintsy mampiasa ny leverage Mitarika tsikelikely ho amin'ny fifanekena voatondro, izay mety ho tena avo sy mampidi-doza. A Forex mpivarotra, mifanohitra, dia afaka soa aman-tsara sy ny varotra maro leverage arakaraka ny haben'ny ny kaontiny. , Ohatra, dia azo antoka ara-barotra manomboka haben'ny ho fanokafana kaonty amin'ny $ 1000 mety ho bitika be dia be, izay mety ho mampiasa amim-pahombiazana leverage aotra. Dia avy eo izy tsy mila miahiahy momba ny 100 pip hifindra decimating ny kaonty; fa, 100 pips hamely azy ho azy ihany no vidin'ny $ 10 (na 1% ny kaonty), ary afaka mitaingina avy maro very po.
Izany mpivarotra dia afaka mametraka ny hery 200: 1 hampiasana ny fahasamihafana, fahafahana na fanampiana. Andao handalo tsirairay isika. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana, dia midika fa ny mety ho fifampiraharaham-barotra miaraka amin'ny paikady samihafa any amin'ny tsena samihafa. Angamba ianao namorona na nahita EA miavaka enina izay manana vokatra lehibe amin'ny famerenana sy fitsapana ny fitsapana, ary te hanana ny fahafahana hivarotra ny EAs enina, mampiasa 2% ny marika maimaim-poana ho an'ny tsirairay. Amin'ny fahafahana, dia midika izany fa mety hisy fotoana eny an-tsena rehefa mahita fahafaha-manao mahagaga ianao ary te-hampanan-karena azy io amin'ny alalan'ny fampiofanana bebe kokoa na toerana bebe kokoa. Raha mieritreritra ianao fa ny tombontsoa dia tena ankasitrahanao, ny fampiasana vola ho anao ampiasaina. Manana fahafahana hitokona mafy sy henjana ianao.
Avy eo dia misy ny toe-javatra ny zava-tsarotra. Efa nijaly be andiana very po, sy ny tantara dia nidina $ 500 avy amin'ny voalohany $ 1000 (50% very), tsara Avy eo amin'izany Raha mbola afaka manohy ny fampiasana 0.01 be habe mba miala amin'ny lavaka, fa ny leverage maniry eo amin'ny vonjimaika, satria be dia be ny haben'ny 0.01 tsara mifehy $ 1000 raha izao ihany $ 500 (ianao ankehitriny mampiasa ny leverage ny 2: 1 tsirairay ny kaonty habeny). Raha ny marina, noho ny 200: 1 leverage hery anaty, ny tantara dia afaka lavo eo ambany $ 100 (90% ny tamin'ny voalohany), ary afaka mbola mampiasa be 0.01 habe mba miezaka miala ny lavaka. Ny lehibe kokoa leverage fahaiza-dia toy izany no mamela anao foana ny loka voalohany sizing toy ny tantara nilatsaka. Ampitahao izany amin'ny boloky hazo, izay rehetra fihenan'ny isan'ny isan-jato amin'ny tantara no hanery anao andian-tsoratra varotra 100 mizara ny kely sy ny soatoavina tahiry kely, izay mety ho azy mafy kokoa sy ela kokoa ny miakatra ny lalana avy amin'ny antsapaka teo.
Amin'ny farany, ny brokerage leverage no mamaritra ny mety indrindra leverage, ary izany dia amin'ny tsara indrindra mahaliana ny varotra ny kely indrindra ambaratonga izany, nanokana ny sisa ho an'ny tsehatra ny voly hafa, fahafahana ary ny zava-tsarotra.
Sisiny, nampiasaina sisiny Ary Free sisiny
Tany am-piandohan'ny lahatsoratra dia namelabelatra ny fomba fividianan'ny mpanjifa miaraka amin'ny kaonty $ 1000 (ny salam-panombohana voalohany) 1 mini mini EUR / USD, izay mendrika ny $ 10,000. Ny fiheverana ny mpanjifa dia manana fitaovana 100: 1 ho an'io kaonty io, avy eo mba hampandehanana ny vola 1 mini mini dia raisiny $ 100 avy amin'ny kaonty ary mandefa $ 9,900 avy amin'ny mpikarakara. Ny vola azony avy amin'ny kaontiny ($ 100) dia ny sisiny or efa nampiasaina sisiny, Izay ampiasaina mba hihazonana ny toerana ara-barotra malalaka. Misy ankehitriny $ 900 tao amin'ny kaontiny izay tsy ho amidy. Ny fahafahana hanao asa iray hafa dia tapa-kevitra tamin'ny tsy andevo sisiny izay ny hitsiny avy izay efa nampiasaina ny amin'izao fotoana dia esorina ny sisiny.
Sisiny na nampiasa sisiny
Ny habetsaky ny vola ao amin'ny kaontinao izay ampiasaina amin'ny varotra an-tsokosoko. Raha manana 100: Brokerage 1 ianao, ary nanokatra 1 mini lot, ny marika ampiasaina dia $ 100. Jereo ny tabilao etsy ambony: Fitakiana / Fitahirizana ambany ho an'ny latabatra ho an'ny varotra maro samihafa. Raha ny marina, ny manaraka dia izao manaraka izao:
Nampiasa sisiny = (tsena Quote ny roa * Maro) / Leverage
(Ohatra ny 200: 1 broker for 1 Mini anjaranao amin'ny 1.2700 EURUSD:
Mba hanokafana sy hitahirizanao ny varotrao dia mila manana $ 63.50 farafahakeliny $ anao ianao ao amin'ny kaonty.
Azo ampiasaina na Free sisiny:
Izany dia ny habetsaky ny vola ao amin'ny kaonty analana ny sisiny (na nampiasa sisiny). Raha manana $ 1000 ao amin'ny tantara ary efa nanokatra 1 Mini betsaka izay mitaky ny sisiny ny $ 100, dia ny afaka no $ 900 sisiny.
Margin maimaim-poana = fitoviana - Margin (na margin efa nampiasaina)
(Ohatra: $ 1000 - $ 100 = $ 900 maimaim-poana)
Ity ambany ity ny MT4 pikantsary ny sisiny, Free sisiny ary sisiny Level (In Terminal Window):
Efa voaresaka inona sisiny sy Free sisiny izany. Ao amin'ny etsy ambony 400: 1 FXPro tantaran'i $ 1399, dia naka ny Mini be izay mampiasa $ 25 sisiny. Izay mandao $ 1371 malalaka sisiny azo ho ahy ny fanampiny po. Ok, avy eo, inona no sisiny ambaratonga (inona moa izany 5504%)?
sisiny Level isan-jato:
Sisiny Level Isan-jato = (hitsiny / sisiny) X 100
Ao amin'ny pikantsary etsy ambony, ny fitovizako dia $ 1397 zarain'ny 25 mitovy amin'ny 55, ary mihamaro amin'ny 100, manana tahiry marika 5504% aho. Inona no dikan'io? Manome anao ny fomba fijerinao haingam-pandrefesana ny habetsahanao, indrindra indrindra ny hanakaikezanao ny hahatongavana amin'ny maridrefy 100%, ny habetsaham-panarenana izay nahatratra ny mpizara maro dia ho tonga amin'ny famoahana antso an-tariby. Aleo horavantsika ity pikantsary etsy ambony ity:
Mila mahay mandanjalanja: 1399.22
Free sisiny: 1371.93
Sisiny ambaratonga: 5504.38%
Aho mampiasa $ 25 sisiny. Fa ny 100% sisiny Call Broker, dia handray ny sisiny antso fanafoanana ny hitsiny, raha latsaka ambany $ 25 (100% sisiny ambaratonga).
Inona no atao hoe sisiny Call?
Na varotra boloky hazo, hoavy na ny Forex, mpivarotra rehetra matahotra ny tena mampahatahotra indrindra dia sisiny antso.
Margin Call: fampitandremana avy amin'ny broker iray izay nanala ny kaontinao ny kaontinao tamin'ny%, ary tsy ampy ny fitadiavana tombony (tombom-barotra mitsingevana - fatiantoka mitsingevana + famoizana entana tsy ampiasaina) amin'ny kaonty hanohanana ny varotrao malalaka.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny mpivarotra dia io no fomba hiarovany ny tenany amin'ny famoizana ny vola nomen'izy ireo anao amin'ny alàlan'ny fanamafisana sy fampitaovana. In Forex dia tsy antso avy amin'ny broker hanampy kokoa ny vola, tahaka ny amin'ny boloky hazo sy ny hoavy. Kosa, dia matetika ny mandeha ho azy na ny ampahany feno fanafoanana ny toerana ny fitantarana, raha latsaka ambany ny fikojakojana sisiny (renivohitra ilaina mba hanokatra ny toerana, ohatra, $ 1000 ho fitsipika be dia be, rehefa mampiasa 100: 1). Jereo ny latabatra ambony. Ny lehibe kokoa ny leverage ampiasaina amin'ny raharaham-barotra manokana, vao mainka mety renivohitra tandindomin-doza ianao, ary ny bebe kokoa ny sisiny Azo inoana ny antso.
Tokony hahatakatra tsara ny sisiny ny fomba miasa, ary aoka ho azo antoka ny mamaky ny sisiny fifanarahana misy eo aminao sy ny broker. Foana izany hevitra tsara foana ny maso eo amin'ny sisiny ary nampiasaina Free sisiny mba hahazoana antoka ianao fa tsy mampiasa be loatra sisiny ary fa manana be dia be maimaim-poana sisiny ankavia.
Rehefa ny broker hoe: sisiny Call ambaratonga = 100%.
Midika izany fa raha vao tonga ny 100% ny mari-pahaizana Margin, dia mahazo antsoina hoe liquidtion ianao (miaraka amin'ny fampitandremana mailaka mialoha) raha toa ka mitovy ny marika ampiasainao ny fitantananao, izany hoe raha toa ka 100% ny sehatra marginalinao. Tsy ho ela dia hikatona ny toerana misy anao (amin'ny ankapobeny, manomboka amin'ny kely indrindra mahasoa raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana ambany indrindra). Raha toa ny fepetra marin'ny 100% margin dia miteraka akaiky kokoa ny antso an-tariby, dia mitahiry vola bebe kokoa raha toa ka tsy azo ihodivirana intsony ny fatiantoka fanampiny amin'ny fisakanana anao tsy ho very ny akanjonao. Manana farafahakeliny vola sisa tavela ao amin'ny kaonty ianao eo amin'ny tsenan'ny tsena.
Rehefa ny broker hoe: sisiny Call ambaratonga = 50%.
Izany dia midika hoe broker tena malala-tanana toy ny fomba mitantam ny fanararaotana ny sisiny fetra. Ho afa-manomboka ny lapam-ny kaonty, rehefa mitovy ny hitsiny ny antsasaky ny nampiasa sisiny, izany hoe, raha ny sisiny haavon'ny nidina 50%.
Rehefa ny broker hoe: sisiny Call ambaratonga 70%, ajanony avy 30%
Ity mpampindram-bola ity dia tena malala-tanana ary manome fampitandremana marina. Ny fampitandremana an-tserasera dia manomboka raha toa ka midina amin'ny 70% ny sidina margin, ary misy ny famoahana rehefa mihena ny 30%. Amin'ny fametrahanao ny haavon'ny tsipika anananao ao anatin'ireny ambaratonga ambany kokoa ireny, dia mety ho trotraka lavitra noho izay mety ho azonao ny fananana antso an-tariby (izay mety ho tsara raha varotra amin'ny rafitra na rafitra maritaly ianao). Na izany aza, raha tsy mitandrina tsara ianao, ireo mpihazakazaka an-dalamby maromaro kokoa dia afaka mamela anao amin'ny havaozina kely amin'ny kaontinao raha toa ka mihetsiketsika mafy aminao ny tsena.
Ity ambany ity ny ohatra ny sisiny antso amin'ny 100% sisiny Call Level Broker.
Jeff dia manokatra kaonty bitika miaraka amin'ny $ 1000 ao amin'ny 100: 1. Manazava ny EUR / USD izy ary manapa-kevitra ny handalo fohy, miditra ny vola mini 4 amin'ny EUR / USD amin'ny vidin'ny 1.3200. Araka ny fomban-doko maromaro etsy ambony [(Market Quite * Lots) / Leverage], i Jeff dia hampiasa $ 520 margin ((1.3200 * 40000) / 100). Alohan'ny hidirana dia ny marika maimaim-poana an'i Jeff dia $ 1000, ary rehefa niditra izy, dia ny $ 480 ($ 1000- $ 520) ny sisintany malalaka. Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika manenjika an'i Jeff ny varotra: EUR / USD mitsambikina 100 anao, ary hatramin'ny pip Ny vola 4 mini dia mitovy $ 4, ny sanda mitovy aminy dia midina amin'ny $ 400 (150X $ 4) mba hahazoana $ 600 (1000-400). Ankehitriny dia hitan'i Jeff izany sisiny Level dia 115% (Sarany / Margin = $ 600 / $ 520), mety manakaiky ny tahan'ny marika 100% max. Amin'izao fotoana izao dia navadika ho mena ny baoridiny. Rehefa EURUSD mitsambikina hafa 25 ianao, ny tahan'ny kaontiny dia mametraka $ 100 (25X $ 4) mba hahazoana $ 500. Ankehitriny izy dia mahatratra ambany ambany ambany amin'ny 100% ary ny rafitra dia manidy mivantana ny varotra amin'ny fahaverezan'ny marimaritra iraisana. Raha toa ka manakaiky ny 100% dia mety hitranga ny zavatra maromaro, arakaraka ny politikan'ny marginal ny broker. Ny mpikarakara sasany dia afaka mametraka liam-pamokarana amin'ny 100%. arakaraka ny politikan'ny marginal ny mpividy, mety ho tanteraka na ho tapaka ny toerana misy azy. Noho i Jeff manana fepetra marihina amin'ny 100% margin miaraka amin'ny brokerany miaraka amin'ny fizotry ny famoahana ny ampahany, ny mpividy dia manomboka manova ny toerany (farafaharatsiny lehibe indrindra aloha) mandra-piverinan'ny kaontiny ambony ambonin'ny angona 100% margin. Tamin'ny voalohany dia mety ho hitany fa ny iray amin'ireo toerana efatra dia tsy nijanona intsony tamin'ny 125 pips, ka nampidina ny fepetra takiana amin'ny $ 390 (ho an'ny $ 500), izay mamerina ny sandany amin'ny 128%.
Fa raha lavo amin'ny tsenan'ny 25 fanampiny ny tsena, dia hahita ny kaontiny $ 75 (25x $ 3) mankany amin'ny $ 375 hitrandrahana, izay manosika azy hidina ambanin'ny ambany 100% max, ary mety ho lany ny vidiny faharoa toerana ao amin'ny 150 pips. Izany dia mety hampidina ny fepetra takiana amin'ny $ 260, ary amin'ny $ 375, dia hiverina amin'ny 144% ny haavony. Angamba, noho izany, nahita fa very tamin'ny 60% tamin'ny orinasany izy, dia niantso azy i Jeff fa hiala sy hamarana ny toerana roa farany amin'ny -150 ny ps ouvin'ny tsirairay, noho ny fahaverezana tanteraka ny $ 625.
Mahantra Jeff, dia naka manararaotra be loatra leverage ka nahazo ny tenany, raha ory. Ny tena tsara, Jeff efa raharaham-barotra tokony ihany 2: 1 leverage, izay mety ho 2 madinika maro noho ny $ 1000 kaontiny (2 madinika maro = $ 2000). Ary nisy 150 voka hetsika azy ho vidin'ny Izy irery ihany $ 30 (150X $ 0.20), ny fahaverezan 'ny ihany no 3% ny kaontiny. Jeff dia avy eo ho afaka hiady andro hafa.
Ahoana no To Aza sisiny Antso & Stop outs?
Mampiasà leverage marani-tsaina. Miezaka ny tsy ho varotra mihoatra noho 2: 1 leverage na oviana na indray mandeha.
Hendry capitalization. Ataovy azo antoka manana vola ampy mba hanokatra sy hihazonana po.
Hampihenana ny loza mety hitranga. Miezaka ny tsy hanao vy very mihoatra ny 3% ny kaonty misy na dia iray varotra.
Toerana mijanona mba hiarovana ny hitsiny avy fatiantoka lehibe.
Farany, ny antso marika dia azo alaina tsaratsara kokoa amin'ny fampiasana ambany lavitra noho ny fanampiana azo atao mba hahatonga ny varotrao ary hanaraha-maso ny balan'ny kaonty ara-dalàna. Matetika dia ny soso-kevitra no tokony hampiasana ny baiko mijanona amin'ny toerana rehetra mba hamerana ny mety hitranga, ary afaka manampy izany, saingy ny fitazonana ny sandan'ny vola kely ambany eo amin'ny balan'ny kaontinao dia ny paikady fitantanana tsara indrindra. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba izany ao amin'ny -bola Management faritra.
Ahoana no tsy sisiny Antso & Stop outs
Raharaham-barotra miaraka amin'ny Latsaky Per Trade Leverage raha hamandrika ny zo ambony Leverage
Inona no atao hoe sisiny antso
Inona no atao hoe Leverage
Inona no mety ho ny mety sy ny Valisoa avy amin'ny fisafidianana ny broker manolotra ambony noho ny hafa leverage